ပှဲတိုငျးကနျနတေဲ့ ဖာနနျဒကျဈကို အနားပေးသငျ့နပွေီလား ? – Premier League Special
ကာရာဘောငျဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျ ပှဲစဉျမှာ မွို့ခံ ပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျအပွီး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ မီဒီယာတှကေ ဆိုးလျရှားကိုဖာနနျဒကျနဲ့ ပတျသကျပွီး မေးခှနျးတဈခုမေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ လာမယျ့စနနေေ့ မှာ ဝကျဖို့ဒျနဲ့ ကစားမယျ့ အကျဖျအဖေလားတတိယအဆငျ့ပှဲစဉျမှာ ဖာနနျဒကျကို အနားပေးဖို့ ရှိ ၊ မရှိ ဆိုတဲ့မေးမွနျးမှုပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွညျတှငျးဖလားဆီမီးအဆငျ့ ရှုံးပှဲကနေ အမွနျဆုံး နိုငျပှဲရယူနိုငျမယျ့ အခွအေနတေဈခုဖွဈပါတယျ။ ဝကျဖို့ဒျ အသငျးနဲ့ အကျဖျအဖေလား တတိယအဆငျ့ ပှဲစဉျဟာ အခုအခြိနျမှာ အသငျးအတှကျ နိုငျပှဲရယူဖို့ အရေးပါတဲ့ပှဲတဈခုဖွဈနပေါပွီ။
မနျစီးတီးအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျအပွီး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ခနျြပီယံ ရှဈအသငျး ဝကျဖို့ဒျနဲ့ ကစားရမယျ့ ပှဲစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး မေးမွနျးရာမှာ နညျးပွ ဆိုးလျရှားက ” ကြှနျတျောတို့ ပှဲတိုငျးကို အနိုငျရလိုစိတျ အပွညျ့နဲ့ ကစားနပေါတယျ။ အသငျးပှဲထှကျလူစားရငျး ပွောငျးလဲမှုကတော့ အနညျးငယျ ရှိပါလိမျ့မယျ။
ဒီလို အပွောငျးအလဲ ပွုလုပျတဲ့ အခါမှာလညျး အသငျးမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတှေ ခွစှေမျးပွ ကစားထားနိုငျတာ တှရေ့ပါတယျ။ မနကျဖွနျမှာ ဘယျသူက ကစားဖို့အသငျ့ရှိသလဲ ၊ ဘယျသူက ကွံ့ခိုငျမှု ပွညျ့ဝဖို့ လိုအပျနသေေးလဲဆိုတာ သခြောသိရပါလိမျ့မယျ။ ” လို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
ဖာနနျဒကျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆိုးလျရှားက ” ဘရူနိုက ပှဲတိုငျးကစားခငျြပါတယျ။ ဒါက ရှညျလြားတဲ့ ပွိုငျပှဲတဈခုပါ။ စနနေမှေ့ာ ဘယျလိုပုံစံ အဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ ကြှနျတျော သူနဲ့ တှပွေီ့း ဘယျလိုခံစားနရေတယျဆိုတာ ဆှေးနှေးသှားဖို့ ရှိပါတယျ။” လို့လညျး ဆကျလကျ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ ကစားမယျ့ ဝကျဖို့ဒျ အသငျးနဲ့ အကျဖျအဖေလား တတိယအဆငျ့ ပှဲစဉျမှာ ကာဗာနီကတော့ သုံးပှဲပယျပွဈဒဏျရဲ့ နောကျဆုံးပှဲစဉျအနနေဲ့ဖွဈနတောကွောငျ့ သူကတော့ သခြောပေါကျ လှဲခြျောဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ပွဲတိုင်းကန်နေတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ကို အနားပေးသင့်နေပြီလား ?
ကာရာဘောင်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်မှာ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မီဒီယာတွေက ဆိုးလ်ရှားကိုဖာနန်ဒက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ လာမယ့်စနေနေ့ မှာ ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ကစားမယ့် အက်ဖ်အေဖလားတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်မှာ ဖာနန်ဒက်ကို အနားပေးဖို့ ရှိ ၊ မရှိ ဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုပါပဲ။ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းဖလားဆီမီးအဆင့် ရှုံးပွဲကနေ အမြန်ဆုံး နိုင်ပွဲရယူနိုင်မယ့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား တတိယအဆင့် ပွဲစဉ်ဟာ အခုအချိန်မှာ အသင်းအတွက် နိုင်ပွဲရယူဖို့ အရေးပါတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ချန်ပီယံ ရှစ်အသင်း ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ကစားရမယ့် ပွဲစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက ” ကျွန်တော်တို့ ပွဲတိုင်းကို အနိုင်ရလိုစိတ် အပြည့်နဲ့ ကစားနေပါတယ်။ အသင်းပွဲထွက်လူစားရင်း ပြောင်းလဲမှုကတော့ အနည်းငယ် ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း အသင်းမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတွေ ခြေစွမ်းပြ ကစားထားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ဘယ်သူက ကစားဖို့အသင့်ရှိသလဲ ၊ ဘယ်သူက ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝဖို့ လိုအပ်နေသေးလဲဆိုတာ သေချာသိရပါလိမ့်မယ်။ ” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုးလ်ရှားက ” ဘရူနိုက ပွဲတိုင်းကစားချင်ပါတယ်။ ဒါက ရှည်လျားတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ စနေနေ့မှာ ဘယ်လိုပုံစံ အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ကျွန်တော် သူနဲ့ တွေ့ပြီး ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။” လို့လည်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားမယ့် ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား တတိယအဆင့် ပွဲစဉ်မှာ ကာဗာနီကတော့ သုံးပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့် သူကတော့ သေချာပေါက် လွဲချော်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။